ntoni ubuchwepheshe blockchain ukuphuhlisa njani 2018? - Blockchain News
ntoni ubuchwepheshe blockchain ukuphuhlisa njani 2018?
Phantse elishumi kwiminyaka eyadlulayo abantu yokuqala wafumanisa malunga nobuchwepheshe blockchain. Ukusukela ngoko, abameli zoshishino ziye esweni uphuhliso obu bugcisa ukufumana ungasayisebenzisiyo kwimihlaba yabo. Ngaphezu, Iinkampani ezininzi lusekiwe ukuhlanganisa zibe kumanyano ezifana Enterprise Ethereum Alliance (EEE), R3, kunye Project Hyperledger, ukwenza izisombululo ezitsha blockchain-based. Sifuna ukwabelana ngezimvo leengcaphephe kuphuhliso blockchain ku 2018, kunye neenkampani uceba ukusebenzisa iteknoloji entsha kwixesha elizayo.
Blockchain Technology Ukuphuhlisa
Njengoko Forbes ithi blockchain kuya kuba neziphumo olwahlukahlukeneyo lwezimo ngendlela abaqeshi ukuhlola abaviwa yaye kuvala izithuba. in 2018, khona apho kuya kubakho amaqonga emininzi kwimarike efanayo APPII, linikeza abasebenzisi abane “smart” yeprofayile inethiwekhi blockchain. Akukho kuphela ezi profayili ziya kuba abasebenzisi iCV, kodwa ulwazi malunga ngokwemeko yazo career kunye nempumelelo, iziqinisekiso lokukhuphisana iinkqubo zemfundo kunye naluphi olunye ulwazi ebalulekileyo. ngaphandle, amaziko emfundo kunye nabaqeshi ziya kukwazi ukufikelela kwi profiles ukuqinisekisa olu lwazi, ngaloo ndlela sizenze zithembeke ngokupheleleyo.
Ingxelo yakutshanje evela IDC Health Insights - yophando kunye ngokuqinileyo babhunga - ithi kwiminyaka embalwa elandelayo nobuchwepheshe blockchain ziya kusetyenziswa kwiindawo ezininzi lwempilo. Isifundo “uqikelelo World of kushishino ezempilo the 2018” Ucingela ukuba nonyaka ozayo 20% kwimibutho kuya ngokubonakalayo ekuphuhliseni blockchain iiprojekthi. by 2020 blockchain iza kusetyenziswa kulawulo zokusebenza, kwakunye nokugcina zolwazi lwezigulane. Le nkampani Skycell ingumzekelo ocacileyo wendlela blockchain kunye IoT zinikeza ikhonkco ubonelelo olufanelekileyo ukuya kwishishini loxubo, olubandakanya iintlawulo, yenethiwekhi, kunye ne-inshorensi.
Ngelo nxaxheba ngexesha elifanayo iprojekthi Blockchain Research Institute, eziquka IBM, Pepsi Co., no FedEx, ulindele ukuba blockchain kuphunyezwa amashishini lokuvelisa kunye nemveliso, akayi kuba nje isixhobo inqununu, kodwa iya kudibanisa isizukulwana sesibini revolution digital, nalowo kuqala kokusungulwa Internet. iinkampani ezifana Foxconn uya kusebenzisa blockchain ukujonga imicimbi engekenziwa kwi chain lwabo ubonelelo.
Blockchain umqondisi LOOMIA uSawule Lederer ikholelwa ukuba 2018 siza kubona nkampani indlela, esele ikwazile ukuba bazingqine kwiimarike ezahlukeneyo, azoqhuba iinkonzo pilot kunye neemveliso esekelwe blockchain kawonke.
Iinkampani ezasungulwa uyabazi kakhulu amaziko indlela ngoyaba le internet kwi 90 badliwa zokuqala web, kwaye abafuni ukuba ngokufanayo lindele kunye ukufika ubuchwepheshe blockchain. Babona ke ukuba uqale ukuhlola kunye blockchain okanye yiya Yindlela blockbuster.
Ngenxa blockchain, ukusetyenziswa kwezivumelwano smart iza kutshintsha kakhulu. kwehlobo Last IT giant IBM, American Insurance Corporation AIG, kunye nenkampani zemali Standard Chartered PLC zigqityiwe pilot uvavanyo lwe blockchain-based “smart” ipolisi ye-inshorensi ngamazwe. Kuba okokuqala blockchain kunye smart kwezivumelwano ezithe zasetyenziswa kwesi shishino, eya kule projekthi ngomlinganiselo okukhulu 2018. Oliver Bussmann uyaqiniseka ukuba blockchain lutshintsha nje kuphela amacandelo zemali kunye inshorensi kodwa uza kuba nefuthe kwezinye amashishini. Ngale ndlela, kunyaka ozayo iinkampani ezininzi kuya kufuneka ukuba ukuziqhelanisa imifanekiso yabo ishishini ukuhlangabezana neemfuno kwiimarike ezintsha.
Kweli hlabathi apho middlemen beba lixesha, iinkampani kuya kufuneka bafunde ukuba ayeke nokucinga zefula kwaye sivulelekile ukuba abe namaqabane zemvelo okanye kumaqonga ngokubanzi. leyo, ekujikeni, kuthetha isigqibo ukuba iintlobo iimodeli zoshishino ufuna - nokuba kudlala platform, kudlala imveliso, izicwangciso Omni-channel, kwaye nangokunjalo.
Oliver Bussmann - umongameli hayi-i-nzuzo Crypto Valley Association kunye owayesakuba CIO kwi iUBS - kuqatshelwe ukuba iibhanki ezinkulu ziya kuba nomdla iinkqubo zentlawulo blockchain, kuba ehendwa iingenelo blockchain kuzisa ngokwemiqathango yokujongwa-time real, iinkangeleko nokuncipha, iindleko eziphakathi elubala. Lo somashishini kwakhona wathi ku 2017, iinkampani ukuba nelungelo ukusebenza ubuyibazele ngakumbi nangakumbi ukuba iintlobo ezintsha nemisebenzi blockchain yenza, ingakumbi xa blockchain kudityaniswe IoT and AI. Ngokuka Bussman, oku kuza kuqhubeka 2018, njengoko ingxelo kutshanje Forbes ithi ngokunjalo. Uhlobo asongiweyo kunye eyaba amandla blockchain iluncedo kakhulu esweni ngonaphakade-inani elandayo izixhobo kwi IoT. Ngaloo ndlela, ingxelo ithi amandla ama esetyenziselwa bitcoins zemigodi zingasetyenziswa ukukhusela amakhaya smart ukusuka wokulwa-abaphangi besizukulwana esitsha.
I-CEO ye elakha Vision, Abhishek Pitti ichaza iimpawu blockchain leyo eya kukunceda ekuphuhliseni ukhuseleko data ngokomelela. Ukholelwa ukuba 2018, kule ndawo baya kubona iingenelo zibalulekileyo ukusuka kuphuhliso efanayo lobugcisa ezifana zokufihlakeleyoComment, ufihlo, kunye blockchain:
Blockchain sisixhobo esinamandla olungenakuzisa utshintsho ethembisayo mveliso ezininzi, kwaye kwangaphambili ukuba Inkqubela zobuchwepheshe encryption zokufihlakeleyoComment, kunye blockchain, iya kuba esa empumelelweni kushishino lwezokhuseleko ku 2018. Njengokuba, i Equifax data lomnqweno yimfumba yinto ngaphezu nje blockchain ukuba lokhu. Nakuba ubuchwepheshe blockchain kwakungase abathengi kwandinceda ngokwenene ngokwaso ukulawula ngakumbi phezu data zabo zobuqu owned yinkampani, izenzo zokhuseleko embi wayeza kushiya ngamaxhoba, okanye ngaphandle blockchain. Apho ngokwenene baya kufika kuyo zabo iimpawu zokhuseleko blockchain iya kuba nokuhlangana yabo IoT. Ngenxa elinyusayo-inani kwezixhobo ezidityanisiweyo, 2018 kuya kufuneka ukwakhiwa zokhuseleko blockchain ukuba ukukhusela izicelo IoT kunye nabasebenzisi ezivela iintanda data zobuchwepheshe. Ndiyakholelwa kakhulu ukuba 2017 kwaba trailer kuphela oko kuza 2018 mgapha ecosystem blockchain kunye necandelo.
Dmitriy Zhulin, co-umsunguli INS Ecosystem, ulindele ukuba ubone blockchain abe iteknoloji yamkelwa ngokubanzi zesiqhelo kwi 2018, wokuguqula wonke umkhosi kwamashishini kwiinkonzo zemali kunye neevenkile, ukuba Freyistata namayeza. Ngelo xesha Max Kordek, co-umsunguli inkampani Lisk, ukholelwa ukuba sinako ukuba iziganeko ezininzi kulawulo network blockchain kwi 2018, neya kubandakanya iindlela imvumelwano entsha kunye nemigaqo ezihlaziyiweyo ekwenzeni izigqibo malunga inethiwekhi upgrades:
Nge Bitcoin kaThixo Umsebenzisi kwasebenza Soft ifolokhwe (UASF), okanye ezinye iindlela Lisk anikezelwe-Ubungqina-of-esibondeni imvumelwano, sinokulindela izisombululo elizayo ezinceda ukwenza izigqibo ezibalulekileyo malunga elizayo projekthi. Umba scalability iya kuba esinye isihloko ashushu kusaqhubeka 2018. Izicwangciso blockchain yangoku nangoku lisasalele emva xa kuthelekiswa ngezantya intengiselwano eyenziwa yi ezikhuphisanayo zemveli ezifana MVUME LOKUNDWENDWELA LEXESHANA okanye Mastercard. Ishishini kuya kufuneka ukuba bafumane izisombululo ezintsha nokwandisa ikhowudi ukuya kwindawo apho aokusetyenziswa kumanqanaba lokhuphiswano ukuphendula. Esi sesinye sezizathu zokuba Lisk yi sidechains lokuqalisa. Ukuqinisekisa umsebenzi womnatha kakuhle kwasasazwa nokuphucula isantya imveliso kwi-network kubalulekile.
Blockchain Technology Ukuphuhlisa 2018
Blockchain News 23 EyoMqungu 2018
iibhanki iUBS yangaphambili la ...
Ukusebenzisa usomashishini ...
Post Previous:ophuhliso kwimakethi Cryptocurrency ku 2018
Post Next:Iziganeko ezibalulekileyo 2017 e Crypto Community